Qolka Show, Tafaariiqda, Dukaanka Buuggu
Qolka Show, Tafaariiqda, Dukaanka Buuggu Iyada oo uu dhiirrigaliyay shirkad maxalli ah si ay u abuurto buugaagta iibka ah ee joogtada ah, oo si buuxda u shaqeynaya oo ku saabsan raad-yar, RED BOX ID wuxuu adeegsaday fikradda 'buugga furan' si uu u qaabeeyo khibrad cusub oo tafaariiq leh oo taageera bulshada maxalliga ah. Waxay ku yaalliin magaalada Vancouver, Canada, buugaagta carruurta ee dunidu waa qolka-hore ee bandhigga, dukaanka tafaariiqda labaad, iyo dukaan saddexaad oo ah dukaanka internetka. Farqiga geesinimada leh, sumadda, laxanka iyo pop midabaynta ayaa soo jiidanaysa dadka, waxayna abuurtaa meel firfircoon oo xiiso leh. Waa tusaale weyn oo ku saabsan sida fikradda ganacsiga lagu kobcin karo iyada oo loo marayo nashqadeynta gudaha.
Cusboonaysiinta Magaalooyinka Fagaaraha Tahrir waa laf dhabarta taariikhda siyaasadeed ee Masar sidaa darteed dib u soo noolaynta naqshadaynta magaaladu waa mid siyaasadeed, deegaan iyo bulsho. Qorshaha sayidku wuxuu ku lug leeyahay in la xidho qaar ka mid ah jidadka oo lagu daro meeraha jira iyada oo aan laga xanaaqin qulqulka taraafikada. Saddex mashruuc ayaa markaa kadib loo sameeyay si loogu habeeyo howlaha madaddaalada iyo ganacsiga iyo sidoo kale xusuus loo sameeyo xuska taariikhda siyaasadeed ee casriga ah ee Masar. Qorshuhu wuxuu tixgeliyey meel ku filan oo lagu hago iyo meelaha lagu fadhiisto iyo saamiga aagga cagaaran ee sareeya si loo soo bandhigo midabka magaalada.
Fagaaraha Dadweynaha Dhiirrigelinta ka dambaysa qaabkan ayaa ah kalgacal u noqoshada fudaydka iyo fahamka la-soo-jeedinta Mondrian iyo astaamaha taabashada dabeecadda iyo xaqiiqadda oo lagu muujiyey wicitaannada Square ee taariikhiga ah ee Kufic. Naqshadani waa mid muujineysa isku soo wada duubnaan udhaxeysa hababka u doodaya farriinta in ay macquul tahay isku-darka qaab muuqaaleed oo iska soo horjeeda oo la xiriira indho-indheynta indhaha qaawan halka markii qotada dheer la qotomayo falsafada ka dambeysa waxaa jiri kara waxyaabo isku mid ah oo ka dhalan kara natiijo farshaxan oo wada waa codsi ka baxsan fahamka cad.
Wakaaladda Guryaha Waxaan ku naqshadeynaa qaab dhismeedka, gudaha iyo muuqaalka mashruucan. Kiisku waa “Hay'adda Realestate Agency”, magaca realestate-ka ayaa ah [Sky villa], sidaa darteed u fikir fikradda iyada oo magaca kiiska loo yaqaan bilowga. Mashruucu wuxuu ku yaalaa magaalada hoose ee Xiamen, shuruudaha ku wareegsan saldhiga waa kuwo aan laga fursan karin, waxaa jira guryo duug ah iyo goob dhisme, oo kasoo horjeedaa waa iskuul, muuqaalka muuqaalka ku xeeran majiro. Ugudambeyn, iyada oo fikradda ah [Dabaqa], u jiid xarunta iibka dhirirkiisu yahay 2F, oo abuuro dhul u gaar ah, barkad dabaq ah, sidaa darteed xarunta iibintu waxay jecel yihiin inay ku dul sabraan biyaha, booqdayaashana waxay u gudbaan acreage ballaaran. balliyo, iyo guud ahaan sagxadda dhulka iibka ah, u lugee jaranjarooyinka dhabarka oo u bax hoolka iibka. Dhismuhu waa qaab bir ah, naqshad dhisme iyo naqshadeynta gudaha ayaa raadineysa is dhexgalka iyo midnimada farsamada.
Guriga Mashruucan waa mashruuc villa ah oo ku yaal [SAC Beigan Hill International Arts Center] oo ku taal agagaarka Shanghai, waxaa ku yaal xarun faneed oo ku taal bulshada, oo bixisa nashaadaadyo dhaqameed badan, villa wuxuu noqon karaa xafiis ama istuudiyaha ama hoyga, xarunta cabirka bulshada waxay leedahay harada weyn ee harada , Moodhkani wuxuu si toos ah u socdaa harada. Tilmaamaha gaarka ah ee dhismaha waa meel bannaan oo gudaha ah oo aan lahayn tiirar, taas oo siineysa kala duwanaanshaha ugu weyn iyo hal abuurka naqshadeynta booska gudaha, laakiin sidoo kale sababtoo ah xorriyadda iyo kala duwanaanshaha boos, qaab-dhismeedka gudaha, farsamada naqshadeynta ayaa ah mid isbeddeleysa, joomatari fidsan. waxay abuurtaa meel gudaha ah, sidoo kale waxay la jaanqaadeysaa fikradaha hal-abuurka leh ee ay wadaan [Art Center]. Nooca heerka-kala-sare ee dhismeedka iyo jaranjarooyinka ugu waaweyn ayaa ku yaal badhtamaha bannaanka gudaha, halka dhinaca bidix iyo midig ay yihiin jaranjarooyin jaranjarooyin leh, marka wadarta shan meelood oo jaranjarada gudaha ah ku xirta banaanka.
Wakaaladda Guryaha Sida "Qoob ka ciyaarka Ribbon", oo leh cabbir dheellitiran oo dheellitirnaan leh, guud ahaan booska ayaa cadaan ah, isticmaal fikradda ku dhajinta alaabada guriga, sameyso xiriir kuxira booska, tan ugu gaarka ah waa xiriirka ka dhexeeya derbiga iyo golaha, isku-darka miis leh saqafka iyo sagxadda, kala gooya qayb ahaan joomatari aan caadi ahayn, oo keliya ma aha inay daboosho qaddarka xad dhaafka ah ee dogobku, laakiin sidoo kale waxay muujineysaa fikradda casriga ah ee dhabta ah, oo muujineysa fikradda qaab-gacmeedka ee qalooca ee ribbon iyada oo loo marayo iftiinka iftiinka.
Qolka Show, Tafaariiqda, Dukaanka Buuggu Cusboonaysiinta Magaalooyinka Fagaaraha Dadweynaha Wakaaladda Guryaha Guriga Wakaaladda Guryaha